कुन् आयोजनालार्इ कति बजेट ? - Karobar National Economic Daily
कुन् आयोजनालार्इ कति बजेट ?
query_builderMay 29, 2017 5:42 PM supervisor_accountकारोबार visibility863
काठमाडौँः अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले व्यवस्थापिका सं‌सदमा बजेट भाषण गरिरहेका छन् । अपरान्ह ५ बजेदेखि उनले आर्थिक वर्ष २०७३–७४ का लागि बजेट पेश गरेका हुन् ।
गाउँपालिकालाई न्यूनतम १० करोडदेखि ३९ करोड र महानगरपालिकालाई ५६ करोडदेखि १ अर्ब १४ करोड रुपैयाँसम्म अनुदान पाउने अर्थमन्त्रीले जानकारी दिए ।
बजेटमा एउटा गाउँपालिकालाई कम्तिमा १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। अर्थमन्त्रालय स्रोतका अनुसार, तीन मापदण्डका आधारमा बजेट विनियोजन गरिएको छ। सरकारले जनसंख्या, भूगोल र विगतको विकास खर्चको प्रवृतिलार्इ आधार बनाएर स्थानीय तहमा बजेट विनियोजन गरिएको छ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका लागि पर्याप्त स्रोत । माथिल्लो तामाकोशी आयोजनाका लागि ५० करोड बजेट विनीयोजन गरेका छन् ।
भूकम्पपीडितलाई घर बनाउन तीन लाख रुपैयाँ दिन थालिएको छ । आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्मका कुल पुँजीगत खर्चको ८४ प्रतिशत खर्च हुनेछ । लगानी सम्मेलनमा १४ खर्ब रुपैयाँ भन्दा धेरै वैदेशिक लगानीको प्रतिवद्धता आएको छ । जलायसयुक्त बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाका लागि १० अर्ब रुपैयाँ बजेट बिनीयोजन गरिएको छ ।
कर्णालीको सडकका लागि ३० करोड रुपैयाँ बजेट, मेलम्ची खानेपानीका लागि ६ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ बजेट,२०७५ मा सकिने जलायसयुक्त बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाका लागि १० अर्ब रुपैयाँ बजेट, व्यापार घाटा बढेर ६ खर्ब ७१ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ ।
चालु अावमा व्यापार घाटा ६ खर्ब रहेको छ । अागामी अावमा ११ प्रतिशत आर्थिक वद्वि गर्ने लक्ष्य रहेकाे छ ।
संघीय स‌ंसद र प्रदेश सभाको निर्वाचन गराउनका लागि बजेटः अर्थमन्त्री
गाउँपालिकादेखि महानगरपालिकासम्मलाई आकर्षक बजेटको व्यवस्था रहेकाे छ । पर्यटक विकास, बैंक तथा वित्तिय संस्थाको नियमन, सार्वजनिक प्रशासन सुधार योजना, स्थानीय गाँउ एक करोड, नगरपाललिका ३ करोड, महानगर १४ करोड ८० लाख, महानगरपालिका ३८ करोड रूपैयाँ बिनियाेजन गरिएकाे छ ।